विद्यालयमा राजनीति: व्यवस्थापन समिति सदस्य छनोटमा निर्वाचनको झल्को ! | Hindu Khabar
विद्यालयमा राजनीति: व्यवस्थापन समिति सदस्य छनोटमा निर्वाचनको झल्को !
सिरहा : बिहानैदेखि थुरथुर काम्ने चिसोमा महिला र पुरुष लाइनबद्ध भएर उभिएका थिए। उम्मेदवार मत माग्दै थिए। केही व्यक्ति उनीहरुको नाम मिलाउँदै थिए। नामावली अनुसार नाम मिलेका विद्यालयमा छिर्दै गए। सुरक्षाकर्मीले भीड व्यवस्थित गर्दै थिए। दृष्यमा आम निर्वाचनको झल्को देखिन्थ्यो। तर, आम निर्वाचन होइन, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ११ स्थित रामदुलारी माध्यमिक विद्यालयको व्ययस्थापन समिति छनोटकै लागि मतदान हुँदै थियो।
‘अभिभावक मात्रै भेलामा बस्दा सर्वसम्मतीबाटै निकास आउथ्यो तर, नेताहरुले दबाब बढाउन थालेपछि सहमति भएनन्,’एक अभिभावकले भने,‘गरिब पढ्ने विद्यालयमा राजनीतिले कहिले नछोड्ने भयो।’ उनका अनुसार नेताहरुले आफ्नो छोराछोरी बाहिर राखेर यहाँ राजनीति गरिरहेका छ। -अन्नपुर्णको सहयोगमा